Izindawo ezihamba phambili ze-Washington, DC
I-united states Washington, DC
Kumelwe ubone Izinto ezithokozisayo kuNational Capital Capital (The Smithsonian and More)
IWashington, DC inamamyuziyamu amaningi amnandi okubheka izintshisekelo eziningi. Kusuka ezikhungweni ezinkulu ezixhasiwe esidlangalaleni kumakhaya amancane omlando, uzofunda okuningi futhi uthole izinkampansela ezamukelekayo lapho uvakashela eziningi ze-museum ze-DC. Nazi ezinye ezimbalwa ezinhle kakhulu.
I-Smithsonian National Museum yoMlando Wezemvelo
Buyenlarge / Getty Izithombe
Kukhona okuthile kuwo wonke umuntu kule museum eyaziwayo emhlabeni. Umlando wemvelo unxusa kuwo wonke ubudala futhi kunezinto eziningi zokusebenza ezingenakukwazi ukubona kuzo zonke ukuvakashelwa okulodwa. Imibukiso ye-dinosaur iyamangalisa futhi inhle kakhulu kubantwana. IHholo LoMndeni Lamafuba Amathumbu lijabulisa kakhulu ukuhlola kanye ne-Sant Ocean Hall. Khona-ke kukhona i-cinematic and landscape kumafilimu e- IMAX okumangalisa kakhulu ukuthi uzofisa ukuthi ube nesikhathi sokuwabona wonke.
Amathiphu okuvakasha: Leyimayamu ethandwa kakhulu eWashington, DC imindeni. Fika ekuseni kakhulu ukugwema izixuku. Thenga amathikithi we-IMAX kusengaphambili noma ngokushesha lapho ufika. Uma uvakashela izingane, qiniseka ukuthi ubone Igumbi Lokutholwa lapho kunezandla eziningi ezenzweni. Vumela okungenani amahora angu-2-3.
Ikheli: 10th Street kanye noMthethosisekelo Ave., NW
I-Smithsonian National Air and Space Museum
Okubaluleke kakhulu kwezindiza eMyuziyamu kaZwelonke we-Air and Space. U-Eric Long / NASM
Le myuziyamu enhle inikeza izivakashi umbono wokubheka ngokuhamba emoyeni nangesikhala ngemidwebo engu-22 yokubukisa, kubonisa amakhulu ezindawo ezihlanganisa izinto ezihlanganisa i-Wright 1903 Flyer, i- "Spirit of St. Louis," ne-module ye-Apollo 11 yomyalo. Eminye imiboniso eyintandokazi ihlanganisa i- golden Age of Flight, Indlela Yezinto Ezihamba Ngayo , I-Wright Brother ne-Invention Ye-Age Aerial, ne- Boeing Milestones ye-Flight Hall. Amafilimu e-IMAX ne- Planetarium zinhle kuwo wonke ubudala.
Amathiphu okuvakasha: Lona ngenye yezintandokazi zaseWashington, DC. Fika ekuseni noma kusihlwa ukuze ugweme izixuku. Thenga amathikithi we-IMAX noma i-Planetarium kusengaphambili noma ngokushesha lapho ufika. Vumela okungenani amahora angu-2-3. Kukhona indawo yesihlomelo eduze neDulles International Airport, Isikhungo seSteven F. Udvar-Hazy , okungaba lula ukufika ukusuka emadolobhaneni futhi ngokuvamile akuyona indawo ephakeme njengeNational Mall indawo.
Ikheli: Independence Ave. e-7th St SW, eWashington, DC
I-US Holocaust Memorial Museum
Steve McAlister / Getty Izithombe
I-museum iyisikhumbuzo kwezigidi zamaJuda ezafa ngenkathi umbuso wamaNazi eJalimane phakathi neMpi Yezwe II. Lemiboniso ilandisa indaba evelele yokuhlukunyezwa futhi ifundisa izingozi zenzondo nokubandlulula. Ukuvakashela le myuziyamu kuyinhlangano engokomzwelo ngakho qiniseka ukuthi unesikhathi esanele nokuqina. Imibukiso engunaphakade ayinconywa izingane ezingaphansi kweminyaka engu-11 ubudala. Kukhona umbukiso ohlukile wezinsuku ezingu-8 naphezulu ezitshela indaba yokuQothulwa Kwesizwe ngamehlo omfana omncane.
Amathiphu okuvakasha: Ukuphambuka okukhathala kwesikhathi kudingekile ukuboniswa okuphakade. Amaphesenti aphelelwe yisikhathi asakazwa ngosuku olufanayo ekufikeni kokuqala, isisekelo sokuqala. Vumela amahora angu-2-3.
Ikheli: 100 Raoul Wallenberg Place, SW, Washington, DC
I-Newseum. UMaria Bryk / i-Newseum
Ukukhanga kwezinga lesithupha, eliphezulu kanye nokusebenzisana kunomlando wokubika kwezindaba kusukela ngekhulu le-16 kuze kube namuhla. Eminye imibukiso eyintandokazi yiPulitzer Prize Photo Gallery (ibonisa izithombe eziwinazo ezitholwa kusukela ngo-1940), i-Today's Front Pages (ibonisa amakhasi angaphambili angu-80 aphephandabeni emhlabeni wonke, olusha nsuku zonke) negalari ye-9/11 (ibheka indlela abezindaba ngayo waphendukela esimweni esibuhlungu). Kunezinkundla ezingu-15 ezihlanganisa nesipiliyoni se-4D esibambileyo. Ungasebenzisa kalula usuku lonke lapha ubukela imidwebo yamashumi eminyaka yemicimbi yemlando.
Amathiphu okuvakasha: Qala ezingeni eliphezulu futhi usebenze ngendlela eya phansi. Lokhu kuyakhangiswa okuthakazelisayo futhi kuwufanelekile imali yokungena. Izaphulelo zivame ukuhlinzeka ngezinyanga zasehlobo. Vumela okungenani amahora angu-4.
Ikheli: 6th St. nasePennsylvania Ave. NW.Washington, DC
Mount Vernon Estate. Ngokuzithandela i-Virginia Tourism Corporation
Ikhaya likaGeorge Washington livame ukunganaki izivakashi ngoba lihlala ngaphandle kwedolobha. Kuyinto "kufanele ibone" ukukhangwa. Uma uvakashele eminyakeni edlule, kufanelekile ukubukeka kwesibili. Le ndawo isethwe ngasogwini loMfula wasePotomac futhi iyindawo ekhangayo kunazo zonke izivakashi endaweni yaseWashington, DC. Indlu yomlando ibuyiselwe futhi ihlotshisiwe njengoba kwakunguWashington ehlala khona. I-museum nezemfundo isikhungo sinezindawo ezingu-25 zemibukiso yezemidlalo kanye nemidlalo yaseshashalazini esitshela indaba yokuphila kukaWashington. Lokhu kuyakhangwa kakhulu futhi kunemisebenzi eminingi yokuxhumana yomndeni wonke.
Amathiphu okuvakasha: Fika kusheshe ukugwema izixuku. Vakashela i-Mansion kuqala njengoba ngokuvamile ivame kakhulu. Qinisekisa ukuthi uthatha isikhathi sokuzulazula izizathu bese uhlola imibono emihle. Hlola isimiso sezinhlelo ezikhethekile. Bhalisela phambili ukuvakasha noma uhambele umcimbi okhethekile. Vumela okungenani amahora angu-4.
Ikheli: George Washington Parkway, Mount Vernon, VA.
I-Lincoln Theatre eWashington DC
Ihhotela - Ihotela Washington
Harbour Washington: Ukuhlola Waterfront Georgetown
Izinzuzo Zokungasebenzi Kwe DC (FAQs and Informationing Information)
I-Nurseries & Izikhungo zeJardin eWashington, DC, MD kanye ne-VA
SW Washington DC: I-Maps ne-SW Waterfront Guide
Usizo lweZipho kanye Nemigomo nokuthi Ungazuza kanjani
I-Londoner e-Resort e-Morritt e-Grand Cayman
Indawo yokuhlala yaseSt. Helens
Izindawo ezinhle kakhulu zaseJalimane (Ingxenye 2)
Pig Out kwezinye Izingxenye BBQ Best Chicago
Lapho Ukubuka I-Super Bowl 50 eNorth Jersey
I-Coquí: I-Tiny, Musical Mascot yasePuerto Rico
Amamitha angaphezu kuka-10 000: Lokho Akwazi Ukuqonda Ikhaya
I-Garden Glow Holiday Light ku-Missouri Botanical Garden
Izindawo ezihamba phambili ezingu-10 zaseMalaysia
Izinto Ezinhle Eziyisikhombisa Okumele Zenziwe Ku-Prince William County, eVirginia
Izindawo zokudlela eziphuma phambili ze-Romantic e-San Antonio
Ukuhamba eNtshonalanga yeJalimane
Isikhathi sokushayela esilinganiselwayo eNingizimu Carolina